Nooca cusub ee cppcheck 2.6 ayaa mar hore la sii daayay kuwanuna waa warkeedii | Laga soo bilaabo Linux
Nooca cusub ee cppcheck 2.6 ayaa mar hore la sii daayay kuwaasina waa warkeedii
Xulka wararka oo dhan | 03/10/2021 13:48 | La cusbooneysiiyay 14/10/2021 18:17 | Noticias
Siideynta nooca falanqeeyaha koodhka guurto ah cppcheck 2.6, in waxay kuu oggolaaneysaa inaad ogaato noocyada khaladaadka kala duwan ee ku jira koodhka C iyo C ++xitaa marka la isticmaalayo syntax aan caadi ahayn oo caadi u ah nidaamyada gundhigga ah.
Uruurinta plugins ayaa la bixiyaa kaas oo dhexgalka cppcheck leh horumar kala duwan, isdhexgal joogto ah iyo nidaamyada tijaabada ayaa la bixiyaa, iyo sidoo kale astaamaha sida hubinta u hoggaansanaanta koodhka qaabka koodhka.
Si loo falanqeeyo koodka, waxaad isticmaali kartaa labadaba adiga oo wax kala dooranaya iyo kan Clang -ka -bixiyaha ee dibedda ah. Waxa kale oo ka mid ah qoraalka donate-cpu.py si loo siiyo ilaha maxalliga ah ee dib-u-eegista koodhka wada shaqaynta ee baakadaha Debian.
Horumarka cppcheck wuxuu diiradda saarayaa aqoonsiga dhibaatooyinka la xiriira dabeecadda aan la qeexin iyo adeegsiga dhismayaasha qatarta ku ah dhinaca amniga.
Ujeeddadu sidoo kale waa in la yareeyo waxyaabaha beenta ah. Dhibaatooyinka la aqoonsaday waxaa ka mid ah: tilmaamayaasha walxaha aan jirin, kala qaybsanaanta eber, isugeynta xad-dhaafka ah, hawlgallada wax-ka-beddelka khaldan, beddelaad aan sax ahayn, dhibaatooyinka xusuusta, adeegsiga STL-ka oo aan sax ahayn, tilmaamidda tilmaamaha aan waxba ka jirin, adeegsiga jeegagga ka dib helitaan dhab ah buux -dhaafiyay xadka kaydka, iyadoo la adeegsanayo doorsoomayaal aan la aqoon.
1 Astaamaha ugu waaweyn ee cppcheck 2.6
2 Sida loo rakibo cppcheck on Linux?
Astaamaha ugu waaweyn ee cppcheck 2.6
Qaabkan cusub se waxay ku darsadeen jeegag kala duwan koonnel -ka, kuwaas oo ay ka mid yihiin xaqiijinta maqnaanshaha ku -noqoshada soo -noqoshada jirka shaqada, iyo sidoo kale tan diiwaannada xogta is -dhaafsan, qeexitaannada dabeecadda aan qeexnayn iyo sidoo kale xaqiijinta qiimaha la isbarbar -dhigay ayaa ka baxsan baaxadda wakiilnimada qiimaha nooca.
Waxyaabo kale oo cusub oo soo baxay ayaa ah kobcinta nuqul ma khuseyso soo noqoshada std :: guuritaanka (maxalliga ah);, oo lagu daray taageero ayaa lagu daray muujinta farriimaha ogaanshaha ee midabyo kala duwan leh oo loogu talagalay aaladaha Unix iyo sumadda maktabadda hadda waxaa ku jiri kara sumad tilmaamayaasha caqliga leh ee leh hanti gaar ah. Digniinta isku xirnaanta la xiriirta ayaa hadda la siiyaa tilmaamayaasha caqliga badan.
Sidoo kale, Xakamaynta Misra C 2012 si buuxda ayaa loo hirgaliyay, oo ay ku jiraan Wax -ka -beddelka 1 iyo Wax -ka -beddelka 2, marka laga reebo xeerarka 1.1, 1.2 iyo 17.3. Soo -ururiyuhu waa inuu sameeyaa jeegagga 1.1 iyo 1.2. Isku -duwaha sida GCC ayaa hubin kara 17.3.
Isbadalada kale ee taagan ee noocaan cusub:
Faylka lama wada furi karo si loo akhriyo loona qoro durdurro kala duwan;
Waxaa lagu daray falanqayn astaan ​​u ah ValueFlow. Delta fudud ayaa la adeegsadaa marka la xisaabinayo farqiga u dhexeeya laba doorsoome oo aan la garanayn;
Xeerarka loo isticmaalo liiska qeexidda calaamadda ayaa sidoo kale u dhigmi kara #waxaa ka mid ah;
Summada maktabadda hadda waxaa ku jiri kara summad oo sidaas darteed shaqooyin bilaash ah oo aqbali kara weelasha sida std :: size, std :: madhan, std :: bilaw, std :: dhammaad, iwm. waxaad cayimi kartaa yeeldheelka ama ficilka weelasha;
Dhibaatooyin go'an oo ku saabsan maaraynta cabirka –cppcheck-build-dir;
htmlreport wuxuu hadda daabici karaa macluumaadka ku saabsan qoraaga (isagoo adeegsanaya eedda git);
Bixinta digniinta dheeraadka ah ee doorsoomayaasha aan joogtada ahayn, laakiin noqon kara kuwo joogto ah;
Dhiqlaha falanqeeyaha urursan iyo cilladaha ayaa la hagaajiyay.
Ugu dambayn, haddii aad danaynayso inaad wax badan ka ogaato nuqulkan cusub, waad la tashan kartaa faahfaahinta xiriiriyaha soo socda.
Sida loo rakibo cppcheck on Linux?
Kuwa danaynaya inay awoodaan inay ku rakibaan cppcheck qaybintooda Linux, waxay raaci karaan tilmaamaha aan hoos ku wadaagno.
Haddii aad tahay isticmaale Debian ah ama qaybinta kale ee ku saleysan ama laga soo qaatay sida Deepin ama Ubuntu, waxaad si toos ah uga soo dejisan kartaa terminal -ka adiga oo garaacaya amarka soo socda:
Hadda kuwa isticmaala Fedora iyo kuwa ka soo jeeda, waxay u samayn karaan rakibidda iyagoo garaacaya amarka soo socda:
Ama kuwa isticmaala Arch Linux ama nooc kasta oo ka mid ah, waxay ku rakibi karaan amarka soo socda:
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Noticias » Nooca cusub ee cppcheck 2.6 ayaa mar hore la sii daayay kuwaasina waa warkeedii
Ventoy: Codsi il furan oo loogu talagalay abuurista darawalada USB ee la kicin karo
Xeerka anshaxa ee Ruby wuu isbedelay sababtoo ah kaftanka jinsiga ee liisaska boostada